I-Bright Central Tucson Casita - I-Airbnb
I-Bright Central Tucson Casita
I-i-guesthouse ephelele ibungazwe ngu-Jacob
Ngethemba ukuthi uzoyithokozela le casita ebukekayo, ekhanyayo, eyimfihlo ebekwe endaweni yekhaya lami lomlando lama-1940s enhliziyweni ye-Tucson.Indawo iyisitudiyo sesimanje esithokomele esinendawo eningi yezivakashi ohambweni lwebhizinisi noma uhambo lwangempelasonto.
Izitolo nezindawo zokudlela ziklelisa imigwaqo emikhulu eseduze eholela ekhempasi yeNyuvesi yase-Arizona eqhele ngekhilomitha nje.Uhambo lwemoto oluyi-10-15min luzokuyisa edolobheni, isifunda se-4th Ave, noma i-I-10.
Le casita yakhiwa ngo-2008, futhi inekhishi elisebenza ngokugcwele. Iyunithi iyistudiyo, kodwa ihlukaniswe kahle phakathi nendawo ngamashalofu amakhulu ezincwadi, okunikeza umuzwa onempilo wokuhlukana.Usebe olukhulu lwamafasitela ohlangothini olusempumalanga kanye nama-skylights kunikeza isikhala umuzwa ogqamile, onomoya.
IBlenman Elm iyindawo ethule, enomlando emaphakathi neTucson. Kodwa ukuba seduze kwayo nomgwaqo omkhulu kanye nekhempasi ye-UofA kusho ukuthi akukho ukushoda kwezindawo ezinhle eduze.Ipaki elikhulu elingaphesheya kwe-Speedway lilungele ukuzilibazisa, futhi izindawo ezifana ne-Eegee's ngaphesheya komgwaqo, i-Choice Greens ezansi nebhulokhi, kanye ne-Culinary Dropout phezulu nje komgwaqo ziyenza ibe yisizinda sasekhaya esihle izinsuku ezimbalwa (noma ngaphezulu)!
Ngitholakala kuwe ngombhalo, ucingo, noma i-imeyili nganoma yisiphi isikhathi, futhi ngingaba semagcekeni phakathi namahora amathathu esimweni esiphuthumayo.Angihlali emagcekeni, kodwa ngingumnikazi ngokuqondile futhi ngiphatha indawo ngokwami futhi ngizokwenza kube lula ukuhlala kahle noma kanjani.
Ngitholakala kuwe ngombhalo, ucingo, noma i-imeyili nganoma yisiphi isikhathi, futhi ngingaba semagcekeni phakathi namahora amathathu esimweni esiphuthumayo.Angihlali emagcekeni, k…